Microsoft OneNote | तपाइँका यन्त्रहरूका लागि डिजिटल द्रष्टव्य लेखन एप्लिकेसन
Office खरीद गर्नुहोस्
विचारहरूले OneNote मा आकार लिन्छन्
एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुहोस्
Evernote बाट OneNote मा सजिलैसँग लैजानुहोस् र सबै यन्त्रहरूमा आफ्ना द्रष्टव्यहरू नि:शुल्क समक्रमण गर्नुहोस्। फेला पार्नुहोस् कसरी
आफ्नो बाटो सिर्जना गर्नुहोस्
तपाइँले न्याप्किन र स्टिकी नोटहरूमा राम्रा विचारहरू लेख्नुहुन्छ? यथार्थ फाइलिङले तपाइँको शैलीलाई थप्छ? तपाइँका कस्ता विचारहरू आकार दिने भन्ने कुनैपनि तरिकाहरूलाई OneNote ले तपाइँलाई समावेश गर्छ। नि:शुल्क फाराम पेनको फिलले कागजमा टाइप गर्नुहोस्, लेख्नुहोस् वा कोर्नुहोस्। तस्विर विचारहरूमा वेबबाट खोज्नुहोस् र क्लिप गर्नुहोस्।
जोकोहीसँग सहकार्य गर्नुहोस्
तपाइँको टोलीले शताब्दीका विचार हासील गर्दैछ। तपाइँको परिवारले ठूलो एकीकरणको लागि मेनु योजना गराउँदै छन्। उही पृष्ठमा रहनुहोस् र तपाइँ जहाँ भएपनि समक्रमण हुन्छ।
तयार हुनुहोस्। सेट गर्नुहोस्। कोर्नुहोस्। स्टाइलस वा फिङ्गरटिप तपाइँलाई आवश्यक एकमात्र उपकरण हो। हस्तलिखित द्रष्टव्यहरू लिनुहोस् र तिनीहरूलाई टाइप गरिएका पाठमा रूपान्तरण गर्नुहोस्। महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई हाइलाइट गर्नुहोस् र विचारहरूलाई रङहरू वा आकारहरूमा व्यक्त गर्नुहोस्।
द्रष्टव्य लिनुहोस्। तपाइँ अफलाइन भएतापनि तपाइँका सामग्रीहरूलाई जहाँकहीँबाट तान्न सजिलो छ। आफ्नो ल्याप्टपमा सुरु गर्नुहोस् त्यसपछि आफ्नो फोनमा द्रष्टव्यहरू अद्यावधिक गर्नुहोस्। OneNote ले जुनसुकै यन्त्र वा प्लाटफाराममा कार्य गर्छ।
डेस्कटप ट्याब्लेट फोन
ट्याब्लेट फोन Wear
सबै यन्त्रहरू Chromebook
Office मा अझ राम्रो
OneNote तपाइँले पहिलै चिनेको Office परिवारको सदस्य हो। Outlook इ-मेलबाट तानिएका नोटहरूलाई बिन्दुहरूसँग आकार दिनुहोस् वा Excel तालिका सन्निविष्ट गर्नुहोस्। सँगै कार्य गर्ने तपाइँका सबै मनपर्ने Office एप्लिकेसनहरूसँग थप कार्य गर्नुहोस्।
कक्षाकोठामा जडान गर्नुहोस्
विद्यार्थीहरूलाई सँगै सहायक ठाउँमा ल्याउनुहोस् वा निजी द्रष्टव्य किताबहरूमा व्यक्तिगत सहायता दिनुहोस्। र ह्यान्डआउटहरू अब धेरै नछाप्नुहोस्। तपाइँले केन्द्रिय सामग्री पुस्तकालयबाट शिक्षाहरू व्यवस्थित गर्न र अधिन्यासहरू वितरण गर्न सक्नुहुन्छ।
कक्षा द्रष्टव्य किताब पत्ता लगाउनुहोस्
विकासकर्ताहरू Office प्राप्त गर्नुहोस् प्रतिक्रिया पठाउनुहोस्
OneNote क्लिपर OneNote मा इ-मेल गर्नुहोस् Office Lens सुविधायुक्त एप्लिकेसनहरू
OneNote मद्दत सामुदायिक फोरम सम्पर्क सहायता
गोपनीयता & कुकिहरू